Qalabka musqusha ee hore u wasakhaysan ka dhig mid cusub | Siouxland Guryaha-Jikada Qasabadaha, Tuunbooyinka Fiilooyinka Weelka, Qasnadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Qalabka musqusha ee hore u wasakhaysan ka dhig mid cusub | Guryaha Siouxland
2020 / 09 / 13 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1111 0
Waa inaad ka qaadataa waxyaabaha ka soo baxa saxanka saxarada si aad si buuxda u shaandhayso. Ugu horreyn, hubi in biyuhu ay fidiyaan fiilooyinka la xidhi karo. Kuwa waqtigoodu dhacay ayaa ku dhegi kara Waxaad lahaan doontaa cillad isku mid ah oo ka heleysa xirmooyinka hore inay furfuraan si ay u bilaabaan ciyaarta. Haddii ay barafoobaan, ku qoo saliid saliid ah, oo sii wakhti aad ku shaqeyso. Xaqiiqdii uma baahnid inaad waxyeello u geysato isku-darka hore.
Markaad joojiso jadwalka, waxay noqon kartaa mid caqli gal ah inaad is weydaarso makiinadaha ku dhex jira. Marwalba leexiso gacmaha si aad u furto tuubada goor hore intaad kala bixin laheyd koobabka waalka si aad ugu tagtid dhaqeyaasha. Xirmooyinka dunta gudaha iyo dibedda gebi ahaanba way ka duwan yihiin. Haddii qalabku si adag u xiran yahay oo aad sidoo kale furto koobka, waxaa suuragal ah inuu kala jaro furitaanka kulanka.
Farsamada ugu wax ku oolka badan ee wax looga qaadayo taranka ayaa leh buunbuunin iyo giraangir fiiqan birta mashiinka laba-taayir. Ku mari roge fiiqista abrasive giraanta fiiqan. Tani waxay yareyn kartaa iyada oo loo marayo dhamaadka hore jaakad cad oo naxaas ah. U adeegso boolisle yar yar si aad u gasho meelaha cidhiidhiga ah ee astaamaha qurxinta leh.
Qalabku waa inuu u ekaadaa mid heer sare ah heerkan, si kastaba ha noqotee dabaqa ayaa hubaal ah in lagu daboolay xoqitaanno cajiib ah. Ku dhaji qaar ka mid ah waxyaabaha aadka u cajiibka badan ee kuhaboon giraangiraha, oo ku xoq xagashada cajiibka ah. Waqti ku qaado talaabadan; meelaha qaarkood waxay u baahan karaan gacan-qabsi.
Markay si buuxda u shiiqdo, ku nadiifi dhammaan dhismayaasha qallajiye. Gasho galoofis ama galoofis balaastik ah si aad u ilaaliso dareeraha ka soo baxa dalooladaada iyo maqaarkaaga isla markaana u ilaaliso saliidaha ka soo baxa duleelkaaga iyo maqaarkaaga inaad ku soo degto dabaqa naxaasta ee cusub Ku dhaji waxyaabaha ka soo laalaada jaakad qalooca meel hawo wanaagsan leh, oo bannaan, kuna buufin dhowr jaakadood oo ah urethane gloss saafi ah.
Bixinta macluumaadka: https://www.wowowfaucet.com/
Hore:: Kushiinka leh hansgrohe: Mustaqbalka shaqa caqli-gal ah oo leh Aquno Xulo M81 - Macluumaad Next: Ku ilaali Biyo Adigoon Ka Fakirin Feebahan Eco-saaxiibtinimada Leh
2021 / 05 / 13 2345
2021 / 05 / 09 1642
2021 / 05 / 08 1474
2021 / 02 / 04 1311
2021 / 02 / 03 1314
2021 / 02 / 03 1282